Wednesday February 03, 2016 - 02:48:23 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info - Amar uu soo saaray Agaasimaha Laanta Socdaalka Somalia ayaa lagu mamnuucay iney diyaaradaha duulimaadyadda gudaha Somalia ka sameeyo tegi karaan Magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera laga bilaabo 22 February 2016.
Agaasimaha Laanta socdaalka Somalia Jeneral Gaafoow ayaa go-aankiisa ku sheegay inuu qaatay kadib markii Maamulka Somaliland uu si xun ula dhaqmay Shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu qasbay iney qaataan Go home.
Agaasimaha Laanta socdaalka Somalia wuxuu sheegay inaan qof Somalia dalkiisa hooyo loogu gooyn karin Go home.
Maamulka Somaliland ayaa shacabka ka soo jeeda Koofurta Somalia kula dhaqma cunsuriyad qaawan iyo xadgudubyo joogta noqday iyadoo bulshadda ka soo jeeda koofurta Somalia lagu amray iney 7 maalmood gudahood uga baxaan Somaliland.
Shacabka ku nool Muqdisho ayaa aaminsan in qaraxyadda lagu hoobto iyo xasilooni daradda ka aloosan Caasimadda Muqdisho laga soo abaabulo Hargeysa .
Ninkii horkaacayay weerarkii lago hoobtay ee argagixisadda Al-Shabaab ku qaadeen Xeebta Liido ee Muqdisho ayaa noqday nin dhalasho ahaan ka soo jeedo beesha Isaaq kaas oo ka tirsan Sirdoonka Maamulka Somaliland.
Sida muuqata hadda Muqdisho waxaa ka socda kacdoono ka dhana Maamulka Somaliland oo la rumeeysan yahay iney aqoonsi ka raadinayaan xasilooni daradda Koofurta Somalia iyagoo maalgelin dhaqaale iyo mid hub siiya argagixisadda Al-Shabaab.